जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस् - Rising Dainik
October 18, 2020 BANDANA KHADKALeaveaComment on जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्
अबैध तस्करहरुको धन्दानै बन्द हुँदै थियो !दिनअघि मात्रै सीमा क्षेत्रबाट अवैध सुर्ती बरामद गरेका थिएअन्तत घाटी रेटी निर्मम ह’त्या गरेँ
October 15, 2020 October 15, 2020 BANDANA KHADKA
शनिको दो’ष हटाउन यी उपाय लगाउनुहोस्
September 26, 2020 BANDANA KHADKA